Ibsa Bu’uressitootaa fi Miseensota Buleyyii ABO - OPride.com
Geessifamuu Tattaaffii Keenyaa
Nuti, bu’urressitootni fi miseensotni buleyyiin ABO hangi walgahuu dandeenye, Mudde(December) 13 fi 14tti bara 2008 Washingtonitti walgeenyee, rakkoo dhaaba keeyna mudate irratti haasofnee, marii keenya isa jalqabaa akka raaww’anneen ibsa baafnee turre. Ibsa keenya sana keessattis murnoota maqaa ABOtiin if yaaman hundaaf dhaamsa asitti aanu dabarsuun keenya ni yaadatama:
“ABO fi humnootni yeroo adda addaa isa keessaa fi irraa hojja-bahan akeeka dhimma ummatichaa hordofanii, sirna tokko jalatti akka hiriiranii ummatas tokkummaa dhaan hiriirsuu dandayan waamicha goona. Jaarmayni keenya ABOn akkuma as dura humnoota bilisummaa wal duukaa hiriirsutti hoogganummaa barbaachisu haaroymsuu dhaamna.”
Murnoota maqaa ABOtiin if yaaman keessaa warra yaamicha keenya kanaaf owwatan lama, Shanee Gumii fi Koree Jijjiiramaa (Yeroo), wajjin ganna lamaa oliif marii araaraa deemsisaa turre. Dursinee, hogganoota yaamicha keenya kabajanii nu jalaa owwataniin “galatoomaa!” jenna. Akkasumas, humnoota deebi’ee tokkoomuu ABO dhugoomsuu irratti bifa gara garaatiin gumaachaa turan hundaniinis “galata qabdan!” jenna.
Mariin ganna lamaa oliif deemsifamaa ture, hedduu ulfaataa fi walxaxaa akka ture hubachiisuu feena. Waan tattaafficha ulfaataa fi danqaa taasise keessaa tokko/ ol aanaa ta’ee kan nutti mul’ate kaasuun dirqii nutti fakkaata. Sunis, akkuma Oromootni deebi’ee tokkoomuu ABOtti gumaachaa turan mul’atan, warri (beekaas ha ta’uu hubannoota gahaa dhabuudhaan) laamsha’ee hafuu gurmuu qabsaaotaa qofatti osoo hin taane kan sabichaattille gumaachaa turan argamuu dha. Hogganoota obsaan fi murannoodhaan, dhiibbaa akkasii irra tarkaanfachuudhaan, nu wajjin tattaafachaa turan ni dinqisiifanna. Dabaleess, qabsaawotni fi ummatni Oromoo idileen haala mul’achaa ture kana irraa barnoota argachuudhaan, tattaaffii tokkummaa ummatatii fi qabsaawotatti gufuu tahuun fedhii nyaaphaatti gumaachu akkasii hundaa maseensuu akka itti fufan yaamicha goona.
Koreen Tokkummaa Adda Bilisummaa Oromoo, kan hogganoota wal-mariyaachaa ture lamaan irraa ijaarame, gaafa Bitootessa 12, 2011tti ibsa baasuun isaa ni yaadatama. Ibsichi ABO deebisanii tokkoomsuudhaaf akka murtaawe eega addeessee booda yaamicha itti aanu dabarsuudhaan akka geessifame yaadachiisuu feena:
“Kan yoomuu yaadatamuu qabu, araaraa fi tokkummaan ABO gaaffii filmaata hin qabnee fi dirqama ta’uu isaa ti. Kanaaf, miseensotaa fi hogganni ABO marti, akkanumas ummata Oromoo fi deggertootaa fi firoonni qabsichaa, ololaa fi hamii farra akeeka eebbifamaa araaraa fi tokkoomuu ABO tiif gufuu ta’an mara akka dura dhaabbatanii fi akka ABO humna murteessaa taasisuuf qabsoo Oromoo finiinsuuuf wareegama feesisu cufa gumaachuutti fuula deebifatan waamicha dabarsina.”
Koreen Tokkummaa ABO yaamicha jabaa fi ifaa akkasii dabarsuun isaa nu mirqaansa, nu gammachiisas. Eega warri walitti kaleessaa turre, erga wal ta’ee yaamicha akkasii dabarsee booda, tattaaffiin keenya akka bakka gahetti ilaalla. Yeroo isaan Walgahii Tokkummaa ABO baallamanii, idda bu’oota meeqa ergachuudhaan akka ragaa taanu nu beeksisan, idda bu’oota keenya filanna. Kan kana irraa hafe waan gara keenyaa eegamu kan biraa akka hin jirre hubanna. Yaamicha Koree Tokkummaa ABO asiin olitti kaa’ames dhibba-fi-dhibbatti ni deeggera, waan kana gabbisuu, jabeesees duratti deemsisu malu maratti gumaachuudhaaf qophii dha.
Hoogganoonni waamicha Walgahii Tokkummaa ABO akka saffisan dhaamachuu dhaan ergaa teenyaa fi ibsa kana xumurra.
Bu’uressitootaa fi Miseensota Buleyyii Adda Bilisummaa Oromoo
Waxabajjii 11, 2011